तेस्रो लिङ्गीसँग सम्बन्ध राख्न सामान्यदेखि अरबपतिसम्म धाउने गर्छन्
Thursday,6Jun, 2019 3:28 PM
भुमिका श्रेष्ठ पछिल्लो समय निक्कै चर्चामा छिन् । वेलायतको एपोलिटिकल नामको संस्थाले विश्वभरका १०० जना प्रभावशाली महिलाको लिष्टमा उनलाई छनोट गरेको छ । त्यसमध्ये पनि उनी अहिले टप टेन युवाको लिष्टमा छानिएकी छन् । छिनेको कम्मरमा पहेलो कुर्ता सुरुवाल अनि आकर्षक मेकअपले झट्ट भेट्नेलाई छुटयाउनै मुश्किल पर्छ, प्रकृतिले दिएको केटाको स्वरुप बदलेर केटी बनेकी भूमीका यीनै हुन त ? समाजमा अझैपनि तेस्रो लिङ्गीलाई हेर्ने नजर बदलिसकेको छैन । असहज वातावरणका कारण आफ्नो पहिचान लुकाउनेहरु अझै धेरै छन् । समाजमा खुलेर तेस्रो लिङ्गीहरुका अधिकारका लागि अभियान चलाउने यीनै तेस्रोलिङ्गी अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठ आज विश्वकै प्रभावशाली व्यक्तित्वको सूचिंमा पर्न सफल भएकी छिन् । उनले प्राप्त गरेको सफलता अनि तेस्रोलिङ्गीको अहिलेको अवस्थाका बारेमा चक्रपथ डटकमका लागि कविता अधिकारीले गरेको संवादको सांरसक्षेप :
विश्वका १०० जना प्रभावशाली महिलाको सूचीमा नेपालबाट तपाईको नाम छानिएको रहेछ, यो सफलता कसरी प्राप्त गर्नुभयो ?
बेलायतको ए पोलिटिकल भन्ने अन्तराष्ट्रिय संस्थाले बिश्वभरिको लैङ्गिक समानता सम्बन्धी काम गरिरहेको मानिसको सूची तयार पार्ने रहेछ । यसमा विश्वभरबाट नौ हजार जनाको नाम संकलन गर्नुभएको रहेछ । नौ हजारको नोमिनेशनमा म पनि परेको छु । त्यसमध्ये १०० जना प्रभावशाली महिलामा म पनि भाग्यवस पर्न सफल भएको छु । त्यसको जर्ज कसरी भयो त्यो चाँहि मलाइ थाहा भएन । छनोटका क्रममा विश्वभरिमा लैङ्गिक समानता, लैंगिक नीतिको कुरा आ–आफनो ठाउँबाट कस्ले कसरी गरिरहेको रहेछ भन्ने मुल्यांकन हुने रहेछ । समाजमा लैगिक नीति भन्ने बित्तिकै महिला र पुरुषको मात्रै कुरा आउछ । त्यो महिला र पुरुषको कुरामा पनि कति महिलामा हिंसा हुन्छ, विभेद हुन्छ । तर मैले हाम्रो क्षेत्रमा महिला र पुरुषमात्र नभएर तेस्रो लिङ्गीको पनि हकअधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर काम गरिरहेको छु । त्यही भएर होला शायद उहाँहरुले मलाई छान्नु भएको । सुरुमा बेलायतको एपोलिटिकल भन्ने संस्थाले मेरो इमेल र फोटो माग्नुभयो । पछि अर्को लिस्टमा मेरो नाम १०० जनाभित्र छानिएछ त्यहीखेर धेरै खुसी लाग्यो । अझ अर्को खुसीको कुरा के छ भने म विश्वकै टप टेन युवाभित्र पनि पर्न सफल भएको छु ।
तपाईसँगै सम्मानित हुनेहरुमा अरु कुन कुनदेशको हुनुहुन्छ ?
सबैको त नाम थाहा छैन । मैले सुनेको अमेरिकी पुर्व राष्टपति बाराक ओबामाकी पत्नी मिसेल ओवामा, स्वीजरल्याण्डका प्रधानमन्त्रीकी पत्नी होलेन । यस्तै टप महिला युवामा इराककी अभियन्ता नादिया मुराद, डटर अफ इभ बेलायतकी सहसंस्थापक तथा निर्देशक निम्को अली, तान्जिनियाकी रेबिका ग्युमी, बेलायतकी अमिका जर्ज, अमेरिकाकी लिना बेन, बेलायतका पत्रकार लिज प्लांक, युएन वुमनकी इमा वाटसन,गाम्बियाकी जहाँ डुकुरे र अमेरिकाकी सारा म्याकबिड छन् भन्ने सुनेको छु ।
प्रकृतिले दिएको स्वरुपलाई च्यालेन्ज दिएर तपाईहरु तेस्रोलिङ्गीको नयाँ परिचय बनाउनुभएको छ । तेस्रोलिङ्गीका बिषयमा केहीमा सामान्य जानकारी भएपनि आम मानिसलाई अझै पनि तेस्रोलिङ्गी भनेको यस्तै हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । कसैले शारीरिक बनावटका साथै यौनाङ्गहरुको बृद्धि नहुनुलाई पनि भन्छन् । कसैले दुइवटा यौनाङ्ग भएर पनि यस्तो हुन्छ भन्छन्, कसैले यौनांङ्ग नै नभएर तेस्रोलिङ्गी हुन्छ पनि भन्छन् खासमा तेस्रोलिङ्गी हुन्छ चाँहि कस्तो ?
यसमा कस्तो छ भने समान लिङ्गप्रतिको आकर्षण समलिङ्गी भइहाल्यो । त्यसमा महिला महिलासँग पुरुष पुरुषसँगको आकर्षणका कुरा हुन्छन् । अर्को दुईलिङ्गी हुन्छ । त्यो भनेको दुबैजनासँग आकर्षण भइहाल्यो । तेस्रोलिङ्गी भनेको हामीजस्तो भयो, जन्मिंदा छोरा तर पछि छोरी । अर्को जन्मिदा छोरी तर पछि छोराको जस्तो हुने । अनी अर्को भनेको अन्तरलिङ्ग्गी दुईवटा यौनाङ्ग भएको जन्मिने हुन्छ । समग्रमा त्यो पाँचवटा प्रकारको मुद्दामा हामी काम गरिरहेका छौ । पहिले तेस्रोलिङ्गी समुदाय, थर्डजेन्डर अथवा ट्रान्सजेन्डर भन्नेबित्तिकै घरपरिवार र समाजमा वा बाटो हिँड्ने प्रत्येक व्यक्ति हामीलाई छक्का, हिजडा र नपुंशक भनेर छिःछिः र दुरदुर गर्थे, भेदभाव गरिन्थ्यो । भगवानको श्र्राप पनि भन्छन् तर त्यस्तो हैन । अहिले भने समाजिक रूपमा केही परिवर्तन भएको छ । तर समाजले नबुझेको कुरा के हो भने हामीजस्ता मानिसहरु हुर्किदै जाँदा इच्छा र चाहना फरक भयो तर सेक्सुअल पार्ट एक्टिभ नहुने भन्ने हुदैन । हाम्रो पनि एक्टिभ हुन्छ तर आकर्षण हुँदैन । प्रकृतिको नियम अनुसार नै हाम्रो पनि शरीर बढेको हुन्छ । कसै कसैको नबढ्ने भन्ने त जहाँपनि हुन्छ नी । सामान्य महिला पुरुषको पनि त्यो समस्या त भइहाल्छ नी । त्यो पार्ट नबढेर एक्टिभ नभएर हामी यस्तो भएको भन्ने चाही हैन । र अर्को सन्तुष्टि दिन नसकेर भन्नेपनि कुरा आउछन् । त्यो पनि हैन । एउटै मात्र कारण हो हामीमा आकर्षण हुदैन । जस्तै केटाको लिङ्ग लिएर जन्मिएपनि मन मष्तिष्कले केटीले गर्ने व्यवहार मन पराउछ । त्यही भएर समाजमा कतिपय उदाहरणहरुपनि छन् । जँन्मिदा छोरा हुन्छ । बाबुआमाले छोराको रुपमा स्वीकार गर्छन् तर उसको दिमाग र मन त्यस अनुशारले बढेको हुदैन अनि छोराको विवाह नै गरिदिएपनि सँगै बस्न सक्दैनन् त्यसैलाई बाहिर सन्तुष्टिसँग जोडेर पनि हेर्ने गरिन्छ तर त्यो बुझाइ गलत हो ।
अब तपाईकै कुरा गरौ छोराबाट छोरीहुनलाई के कस्तो मेहनत गर्नुपर्यो । शरीरका कुनकुन अंग परिर्वतन गर्नुभयो ?
छातीको प्लाष्टिक सर्जरी गरे । पहिला पहिला बुढापाकाले भन्थे,–‘केटीको ज्यान छातीमा र केटाको अण्डकोषमा हुन्छ तर त्यो होइन रहेछ ।’ आकर्षण भनेको अर्गानबाट हैन बिचारबाट मनदेखी आउनुपर्छ । अण्डकोषको हर्मोनले दारी जुँगा आउने अरु चिजहरु केटाको शरीरमा हुने गर्छ त्यही भएर मैले अण्डकोष फालिदिए । मलाई त्यो पार्ट आवश्यक नै छैन । अलिकता कमजोर फिल चाँहि भयो । मलाई यो रुपमा दाँही जुँगा पालेको त सुहाउदैन नी ? त्यही भएर मैले केटाको हर्मोन आउने भाग नै निकालेर फयाकिदिए । छाती पनि सर्जरी गरेर बनाए । महिलाहरुले खाने हर्मोन खानेगरेको छु । अब केटाको अगाडीको भाग (लिङ्ग) सर्जरी गर्ने प्रोसेसमा छु । त्यो अझै पनि केटाको नै छ ।
छातीको प्लाष्टिक सर्जरी र अण्डकोष फाल्ने कामचाँही नेपालमा नै गर्नुभयो की बिदेश जानुभयो ?
छातीको प्लाष्टिक सर्जरी थाइल्याण्डमा गएर गरेको हुँ । अण्डकोष चाँही नेपालमा नै फालेको हो । यस्तो सर्जरी टिचिङ्गमा पनि गरिदिन्छन् । मैले सबैतिर बुझेर नै नेपालमा गरेको हो । अहिले कालिमाटीमा एउटा प्लाष्टिक सर्जरी क्लिनिक छ त्यहाँको म सद्भावना राजदुत हुँ । महिले अण्डकोषको सर्जरी त्यही नै गरेको हुँं ।
यो तेस्रो लिङ्गी समुदायमा विशेष गरी केटाबाट केटीहुन खोज्नेहरु अलि बढि देखिन्छन् यस्तो किन भइरहेको छ ?
यस्तो हो, केटाबाट केटी भएकाको चाँहि मेकअप डे«सअपबाट ठयाक्कै चिनिन्छ । उनीहरुको त्यस्तै खालको मेकअप हुन्छ । तर केटीबाट केटा भएका पनि धेरै छन् नी ? तर मानिसहरुले त्यति वास्ता गदैनन् । समाजमा पनि केटीबाट केटा बन्न खोज्नेलाई ओ हो कति तगडा, कति स्मार्ट, कति बोल्ड रहेछ भन्छन त्यो खालको प्रसंसा हुने भएकाले त्यति देखिदैन । तर छोरालाई चाँहि, छोरा भनेर जन्माएको तैले मेरो नाकै काट्स् िभनेर दुःख दिने घरपरिवारले सहयोग नगर्ने । अनि परिवारले सहयोग नगरेपछि घर छोडेर हिड्न परयो । दाँही जुँगा छोप्न त्यही खालको भद्धा मेकअप गर्ने गर्छन त्यो अलि नसुआएको जस्तो देखिन्छ । हामीसँग त बास्तविक तथ्यांक त छैन तर सात आठ लाख तेस्रो लिङ्गी छन भन्ने अनुमान चाहि छ ।
तेस्रोलिङ्गीहरुको प्रेम, शारीरिक सम्बन्ध अनि विवाह सम्भब छ की छैन ?
प्रेम सम्बन्ध अनि विवाह सबै सम्भब हुन्छ । हाम्रो विवाहलाई कानुनले मान्यता दिएको छैन । अरुको जस्तै केटा केटीको प्रेम कसरी बस्छ हाम्रो पनि त्यस्तै नै हो । अब मेरै कुरागर्नुहुन्छ भने मेरो पनि केही समय अगाडी केटासाथी थियो । उस्ले जहिल्यै शंका गर्ने, छोडेर अन्त जाला भन्ने, बाटो हिड्दा हेलमेट लगाएर हिंडनपर्ने, कोठाभित्रै बस्नुपर्ने छोटा कपडा लगाएर हिड्न नमिल्ने । बाहिर हिड्न नदिने अनि म अधिकारकर्मी भएपछि बाहिर हिडन परेन त ? अनि अति भएपछि पुलिस केस नै गरेर छोडाउन लगाउन परयो । अब शारीरिक सम्बन्धका कुरामा तपाईहरुलाई थाहा भएकै होला । हाम्रो त व्याक साइटमा नै हो सम्बन्ध राख्ने । व्वाइ फे्रन्ड उसलाइ म अगाडीको पार्ट देखाउछु भन्ने हुदैन । अगाडीको पार्ट कहि कुनैपनि बेला प्रयोग हुदैन किन भने इच्छा नै हुदैन । अन्य उपाय नभएपछि आफनो मनपर्ने व्यक्ति नजिक बस्दा नै आनन्द आउछ । बिचार र दिमागको कुरा त हो नी । फिलिङ्गस र दिमागले हामी अगाडी बढिरहेका हुन्छौ । हामी कस्तो मानिस हौ भन्ने कुरा थाहा पाएर नै सम्बन्धराख्न आउनुहुन्छ । कोही कोही पछि लाग्छन पछि थाहा पाएर भाग्ने पनि छन । तर सम्बन्ध भनेको श्रीमान श्रीमतीको जस्तै हुन्छ ठाकठुकपनि हुन्छ ब्रेकअप पनि ।
भनेपछि विवाहको मान्यता पाउने हो भने तपाई विवाहगर्न तयार हुनुहुन्छ ?
म छैन विवाहगर्ने योजनामा । विवाह गर्छु अरुको घर जान्छु भन्ने सोच बनाएको छैन । अहिले लैगिक समानतामा कामगरेर १०० जना प्रभावशाली महिलामा पर्ने जुन कुरा आयो नी, यो यतिकै त आएको हैन । अब फेरि म श्रीमानसँग विवाह गरेर बुहारीभएर अर्काको घर जाने सोच बनाए भने अगाडी कसरी बढन सकिन्छ ? पहिला पहिला मलाई बच्चा पाउन रहर लाग्थ्यो अब त्यो कुरा सम्भब छैन भन्ने सबै बुझिसके । बच्चा पाउन सक्दिन बुहारी भएर बस्न सक्किदन भने कुन चाहि केटाले विवाह गर्छु भन्छ र ? यदि यि सवै कुरालाई स्वीकारयो सरकारले विवाहको मान्यता दियो भने त म झयाइ झयाइ विवाह गर्न तयार छु ।
तेस्रो लिङ्गीले पाठेघर राखेर बच्चा जन्माउन सक्छन् भन्छन त , के यो सम्भब छैन र ?
त्यो भन्ने मात्रै हो । पाठेघर राख्न पनि मिल्दैन । मिन्सुरेसन हुँदा पनि हुदैन त्यो केही हुँदैन । जन्मजात केटीको ओभरी हुन्छ भित्रै अण्डा बन्छ । अनी केटाको पाठेघर राख्यो भनेपनि अण्डा कसरी बन्छ नी ? त्यो त सम्भब नै हुँदैन, भन्ने मात्रै हो । सन्तोष पन्तकै छोराले पनि छोरी बनेर पाठेघर राखेर बच्चा पाउने चर्चा सुनिएको थियो त्यो चर्चा मा आउन हुन सक्छ तर यो कंही पनी सम्भव छैन । कसैले पाठेघर राखेर बच्चा पाउँछु भन्छ भने अनी अण्डा चांही कसरी बन्छ रे त ? केटी कै अंग बनाएपनि पुर्ण केटी चाहिँ हुन सक्दैन । मेरो चाहनाले म खुसी हुन सक्छु तर बच्चा जन्माउने कुरा सम्भब छैन ।
अझैपनि कतिपय तेस्रोलिङ्गीहरु सडकमा हिड्नेहरुसँग माग्ने तान्न आउने गर्छन् । त्यो के हो पैसा नभएर नै त्यस्तो गरेका हुन् कि खानका लागि अरु केही उपाय नभएर हो ?
ठमेलमा हाम्रो कतिजना यौन व्यवसायी साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुसँग रिक्सा डाइभरदेखि अरब पति खरबपति नाम चलेका व्यवसायीहरु पनि सम्बन्ध राख्न जानुहुन्छ । मलाई चाही प्रस्ताव राखिहाल्न सक्दैनन । फेरि म तेस्रो लिङ्गीको अधिकारकर्मी पनि भए तपाईसँग जसरी म खुलेर बोलिरहेको छु । अन्त त यसरी बोल्दा पनि बोल्दिन नी । त्यही भएर मैले आफनो हैसियत ख्याल गरेको हुन्छु तर साथीहरुले भन्नुहुन्छ ठुला ठुला घरको व्यक्तिहरु सम्बन्ध राख्न आउनुहुन्छ भनेर । तेस्रो लिङ्गीलाई जागिरको व्यवस्था छैन । समाजले हेलाको दृष्टिले हेर्छ बस्न खान समस्या भएपछि बाच्नका लागि उहांहरुले यौन व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ । तर बाटोमा हिंड्दा हिंड्दै तान्न आउनु भनेको चाँही बेइमानी नै हो ।